Top 3 Izindawo ezihamba phambili Zohambo Lwesitimela Ezisuka eLondon | Londoloza Isitimela
Ikhaya > Izikhangibavakashi Europe > Top 3 Izindawo ezihamba phambili Zohambo Lwesitimela Ezisuka eLondon
(Kugcine ukubuyekezwa On: 22/11/2021)
I-U.K. I-capital ipakisha izinto eziningi ezijabulisayo kubahambi kanye nabantu bendawo ngokufanayo. Ukusuka eBig Ben naseLondon Eye kuya eWestminster Abbey naseBuckingham Isigodlo – kunezindawo eziningi ongazivakashela eLondon. Bese kuba khona nesakhiwo esicacile, ukuphila kwasebusuku okukhazimulayo, kanye nokudla okumnandi. Nokho, lokho abantu abaningi abavame ukukukhohlwa ukuthi iLondon nayo iyindawo ekude nohambo oluningi uhambo ngesitimela izindawo e-U.K. futhi Europe.
Ukuthi ufuna ukubalekela isimo sezulu saseLondon esifiphele futhi uphume ilanga noma ungene endaweni yokuhlangana nomlando, uzothola izindawo eziningi ezizungeze iLondon. Ingxenye engcono kakhulu ukuthi awudingi ngisho nokulwa nolayini abade bokuhlola ukuphepha esikhumulweni sezindiza. Kunalokho, ungamane ukhethe indawo oya kuyo bese ugibela isitimela usuka kwesinye seziteshi eziningi eLondon. Nazi 3 Izindawo ezihamba phambili Zohambo Lwesitimela kusuka eLondon.
I-Magic Charm Yokugibela Izitimela
Kungakhathaliseki ukuthi uvakashela eLondon izinsuku ezimbalwa noma uhlale edolobheni isikhathi eside ongayikhumbula, ukuthatha a ngesitimela ingashintsha umbono wakho mayelana nedolobha. Ngaphandle komfanekiso wedolobha elikhulu, ILondon izungezwe abantu abaningi amadolobhana amahle, amadolobha ekolishi, amabhishi, nasemadolobheni akudala.
Zonke lezi zindawo zifinyeleleka kalula ngesitimela esisuka eLondon, futhi ngeke kukuthathe ngaphezu kwamahora ambalwa ukufika. Ukugibela isitimela kusuka eLondon kungenye yezindlela ezibaluleke kakhulu zokuzizwisa isiNgisi oyoke uzibonele.
Kodwa ingxenye engcono kakhulu yalolu hambo lwesitimela olusuka eLondon akuyona indawo oya kuyo. Uhambo oluthatha ihora lunikeza amazwibela endawo yasemaphandleni yaseYurophu egcwele izinqaba zase rustic, imithombo yamanzi ahlanzekile, namagquma agelezayo.
Ngakho, ngaphandle kokuchitha isikhathi, ake sibheke ukukhetha kwethu kwezindawo ezihamba phambili zohambo lwesitimela olusuka eLondon.
1. Izindawo ezihamba phambili Zohambo Lwesitimela Ezisuka eLondon: Brighton
Uma ucabanga ukuthatha uhambo lwesitimela olusuka eLondon, IBrighton cishe indawo yokuqala ezofika engqondweni yakho. Kufakwe nebhishi letshe elihlanzekile, amathilomu e-hip, izindawo zokudlela zikanokusho, kanye nemigwaqo emincane emazombezombe, I-Brighton inikeza ikhefu lokwamukela empilweni yasemadolobheni enesiphithiphithi.
Ngaphezu kwalokho, Idolobhana elingasolwandle elihle liyikhaya leRoyal Pavilion emangalisayo, isigodlo esineminyaka engu-200 ubudala esake saba yindawo yokuhlala yasehlobo yeNkosana yaseWales. Eyaziwa kakhulu ngokuthi “iGay Capital yase-U.K”, I-Brighton iphinde ibe yikhaya lemigoqo ehlaba umxhwele yama-queer-friendly kanye nomkhosi omangalisayo waminyaka yonke wokuziqhenya kwezitabane..
Ngemva kokucwilisa imisebe yelanga efudumele, ukuhamba phansi emigwaqweni ye-Brighton engavamile kuzokuvumela ukuthi uthole uhlangothi olusha lwedolobha. Imizila emincane ifakwe izitolo zesikhumbuzo zakudala, vinyl irekhodi izitolo, nezindawo zobuciko ezihehayo.
Ungakhohlwa ukuma ukuze uthole inkomishi yekhofi kwenye yezindawo zokudlela ezinhle ezigcwele le migwaqo. Noma ungajabulela ipayinti eqabulayo kwenye yezingadi zikabhiya. Futhi, hlala ubheke ezinye zezibonelo ezinhle kakhulu eziphilayo ze-architecture yekhulu le-16.
Ezinye izinto ezikhangayo eBrighton zifaka iPreston Park Rockery, okuyingadi enkulu yamadwala e-U.K, kanye neBrighton Palace Pier ekhazimulayo. Kuwukudla okuningi abahambi solo njengoba kunjalo ngemindeni.
Kungakhathaliseki ukuthi ufuna uhambo olusheshayo losuku noma ukuphumula ngempelasonto uthole kusuka eLondon, I-Brighton iyisinqumo esihle kakhulu. Ungakhohlwa ukufunda okwengeziwe mayelana Izinto ezinhle kakhulu ongayenza eBrighton, i-U.K., ngempelasonto ngenkathi uhlela uhambo lwakho.
Sifika eBrighton Ngesitimela
Okuhle ngeBrighton ukuthi ungafika edolobheni usuka eLondon cishe ihora. Izitimela eziya eBrighton zisuka njalo 10 imizuzu evela eziteshini ezahlukene, kuhlanganise nesiteshi saseLondon Victoria kanye neLondon St. Pancras esiteshini.
2. Izindawo ezihamba phambili Zohambo Lwesitimela Ezisuka eLondon: Stonehenge futhi Salisbury
Ngayo izinqaba medieval nezigodlo zombuso, i-U.K ayinakho ukushoda kwezinto eziheha abantu abathanda umlando. Kodwa uma ufuna isipiliyoni sokuqala sokubuka amakhasi encwadi yomlando aphile, ukuvakashela e-Stonehenge kuyadingeka.
Isakhiwo esikhulu samatshe sangaphambi komlando, kukholakala ukuthi kungaphezu 5,000 ubudala, iyaqhubeka idida izazi-mlando nabavubukuli ngokufanayo. Izivakashi azikwazi ukuzibamba kodwa ziyazibuza ukuthi abakhi bakwazi kanjani ukuhudulela lezo zigxobo zamatshe ezindaweni zabo zamanje.
Itholakala ngaphansi 10 amakhilomitha ukusuka eSalisbury, Stonehenge iwuhambo lwesitimela lwemizuzu engama-90 ukusuka e-U.K. inhlokodolobha. Uzothola inqwaba yamabhasi namatekisi esiteshini sase-Salisbury azokuyisa endaweni yangaphambi komlando.
Ngenkathi ulapho, ungakhohlwa ukuhlola ezinye izinto ezikhangayo isifunda okufanele sizinikeze. Lokhu kufaka phakathi umbuthano we-stellar timbered of Woodhenge kanye nezinsalela ze-Durrington Walls engaqondakali..
Futhi, kuwumqondo omuhle ukuchitha isikhathi edolobheni elinomlando laseSalisbury. Hamba uye eSalisbury Cathedral yangekhulu le-13 bese wehla eKhathedrali Vala ukuze ubone i-Elizabethan ne-Victorian. izimangaliso yezakhiwo. Ungazihlanganisi nesitolo esithengisa izinto e-Market Square ngaphambi kokuyothenga ipayinti likabhiya ekhefi engaziwa..
Ukufinyelela Stonehenge Ngesitimela
Thatha isitimela esiya eSalisbury usuka esiteshini saseLondon Waterloo. Uma ufika esiteshini sase-Salisbury, gibela itekisi yangasese noma ibhasi ukuze ufike e-Stonehenge. Qiniseka ukuthi ubhukha uhambo lwakho lwe-Stonehenge kusengaphambili.
3. Izindawo ezihamba phambili Zohambo Lwesitimela Ezisuka eLondon: I-Cotswolds
Uyazi indawo okufanele uyivakashele lapho isiqokwe “njengeNdawo Yobuhle Bemvelo Okuvelele”. Ngamagquma aluhlaza, izingadi zezimbali ezenziwe ngomumo, ama-cottages amatshe oju, kanye nezithabathaba zezindlu, I-Cotswolds isithombe esikhafulayo sendawo yasemaphandleni yamaNgisi yakudala okungenzeka ukuthi uyibonile kumamuvi.
I-Cotswolds ingenye yalezo zindawo lapho ungadingi ukwenza okuningi ukuze uphumule usuka eLondon.. Izinto ezikhangayo ezidumile esifundeni zifaka i-Broadway Tower, Burton-on-the-Water, I-Bibury, kanye neSudeley Castle.
Ukufinyelela eCotswolds Ngesitimela
Indawo yaseCotswolds izungezwe i-cornucopia yeziteshi zesitimela, kuhlanganise ne-Banbury, Bath, e-Cheltenham, kanye ne-Morten-in-Marsh. Indlela engcono kakhulu yokufinyelela e-Cotswolds usuka eLondon ukuthatha isitimela esisuka esiteshini sase-London Paddington siya e-Morten-in-Marsh.. Uhambo lwesitimela lwemizuzu engama-90 likuklomelisa ngalo ukubukwa obumangalisayo emaphandleni angamaNgisi.
Ngokuzayo lapho uzithola uhalela iholide eliphumuzayo, ungachithi isikhathi esiningi uhlela. Kunalokho, gibela esitimeleni kusukela kunoma yisiphi isiteshi saseLondon bese ubalekela kwenye yalezi zindawo ezinezithombe ezinhle kakhulu e-U.K.
Thina ku Londoloza Isitimela izojabulela ukukusiza ukuthi uhlele uhambo lokuya kulezi Eziphezulu 3 Izindawo ezihamba phambili zohambo olusuka eLondon.
Ingabe ufuna ukushumeka okuthunyelwe kwebhulogi yethu “Phezulu 3 Izindawo Ezingcono Kakhulu Zohambo Lwesitimela Ezisuka ELondon” ungene kusayithi lakho? Ungakhetha ukuthatha izithombe zethu nombhalo futhi asinike credit enesixhumanisi lokhu post blog. Noma chofoza lapha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fzu%2Fbest-train-trip-destinations-london%2F - (Skrolela phansi kancane ukubona Shumeka Ikhodi)
BestTripDestinations London Izincwajana zemininingwane Izikhangibavakashi uhambo ngesitimela TrainTripLondon
A part-time traveler and explorer who loves to share her experience in her writing. I believe in expressing my views firmly and standing by my actions - Ungakwazi uchofoze lapha ukuze Xhumana noRebecca